सन्दर्भ पृथ्वीनारायणको, चर्चा राष्ट्रवादीको
सन्दर्भ : २९८‍‌‌औँ पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, २७ पुस
आज २७ पुस । आजभन्दा २९७ वर्षअघि तत्कालीन गोर्खा राज्यमा एक महापुरुषको जन्म भयो । ७ महिनामै जन्मिएका ती महापुरुष जन्मिनेवित्तिकै अनुमान गरियो– यो मान्छे महान् मान्छे बन्नेछ ।
भयो पनि त्यस्तै । उनी साँच्चै महान् मानिस बने । उनी हालको नेपाली भूभागको एकीकरणका एक प्रमुख कर्ता हुन् ।
टुक्राटुक्रामा छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरूलाई भौतिक एकीकरण गर्ने व्यक्ति उनै हुन् अर्थात् तत्कालीन गोर्खा राज्यका शासक पृथ्वीनारायण शाह ।
पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा यद्यपि धेरै प्रकारका आलोचना र अफवाह हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् । शासक, त्यसमा पनि झण्डै तीन सय वर्षअघिका । त्यसबेलाको नेपाली समाजको सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाको अनुमान अहिले पनि सजिलै लगाउन सकिन्छ ।
त्यस्तो समाजमा शासकको भूमिका र तामझाम अनि व्यवहारबारे बोलिरहनु पनि पर्दैन किनकि केही वर्षअघिसम्म मात्र पनि हामीले हाम्रा निरङ्कुश शासकका गतिविधि, सोच र व्यवहार भोगिसकेका, देखिसकेका छौँ ।
यो पक्षलाई यहीँ थाँती राखौँ । चर्चा निरङ्कुश र तानाशाही शासकका राष्ट्रवादी, जनहितकारी कार्यको मात्र गरौँ ।
के निरङ्कुश वा तानाशाही शासक सधैँ नकारात्मक, निर्दयी वा शोषक मात्र हुन्छ ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने हाम्रै अर्थात् नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमै प्रस्ट खोज्न सकिन्छ ।
कुरा पृथ्वीनारायण शाहबाटै सुरु गरौँ ।
के पृथ्वीनारायणले आफ्नो शासनकालमा सबै नकारात्मक कार्य मात्र गरे ? के उनी नेपाली समाज वा जनताका लागि शोषक, सामन्त र निरङ्कुश शासक मात्र रहे ?
उत्तरमा भेटिने केही तथ्य यहाँ प्रस्तुत छन् ।
पृथ्वीनारायण शाह नेपाल र नेपालीका लागि अविष्मरणीय र अत्यन्तै सम्मानित शासक हुन् । कारण, उनले माथि भनिएझैँ छरिएर र विभाजित भएर रहेका अनेक राज्यलाई एकताको मालामा गाँसे । उनले भौतिक (जमिन) मात्र एकीकरण गरेनन्, सामाजिक न्याय र सुव्यवस्थाका लागि नेपाललाई ‘चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी’ भनेर जातीय, साम्प्रदायिक र सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरणको प्रयास पनि गरे ।
उसो त पृथ्वीनारायणले आफ्ना दिव्य उपदेशमार्फत् राज्य, शासक, नागरिकलगायका भूमिका र दायित्वका विषय पनि उठाए । उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका जिम्मेवारी र आचरणका कुरा पनि उपदेशमा उठाए । घुस लिने र दिने दुवैलाई देशका शत्रु भने ।
उनले त्यस समयमा पनि मुलुक र जनताप्रति कति संवेदनशीलता र दूरदर्शिता देखाएका छन् भन्ने क्रा यी कुराबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
उनले दिव्योपदेशमै भनेका छन्, ‘आनी भएको ठाउँमा भएको गाउँलाई अन्य स्थानमा सारर त्यहाँ खानी चलाउनू र उब्जनीयोग्य जमिनमा घर बनेको भए उक्त घर भत्काएर त्यहाँ खेतीपाती गर्नू ।’
यो उपदेशले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र अनिकालबाट जनतालाई बचाउने उनको ध्येय देखिन्छ ।
यसरी नै पृथ्वीनारायणले भनेका छन्, ‘अदालतको पैसा दरबारमा नलैजानू, त्यसको सदुपयोग जोगी, सन्यासी र ब्राह्मणलाई भोजन गर्नमा खर्च गर्नू ।’
यसको आसय उनी धर्मकर्ममा निकै सचेत थिए भन्ने हो । अध्यात्मचेत उनमा कति रहेछ भन्ने यस दिव्योपदेशबाट बुझ्न सकिन्छ ।
उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टहरूले न्याय निसाफ परम्परालाई बिगार्छन् यसर्थ भ्रष्टहरूलाई जति र जस्तोसुकै कारबाही गरे पनि पाप लाग्दैन ।’
यसले पृथ्वीनारायणको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र भ्राष्टाचारप्रतिको असहनशीलता बुझन सकिन्छ ।
त्यसबेला राज्य विस्तारका लागि लडाइँ गर्नु नै शासकको प्रमुख ध्येय र योजना हुने गथ्र्यो । र, यसो नगरेका भए हामी आज यो नेपाल भन्ने मुलुकका नागरिक नभएर टुक्रे राज्यका रजौटा मात्र हुने थियौँ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारका क्रममा मरेका सिपाहीका सन्तानलाई राज्यबाट प्रोत्साहनका लागि विशेष व्यवस्था गरेका थिए ।
यो उनको एउटा जिम्मेवार शासक हुनुको प्रमाण र दायित्व पनि थियो । यसका कारण उनका पक्षमा राज्यका निम्ति ज्यान दिन सिपाही तयार भए र ‘विशाल’ नेपाल निर्माण हुन गयो ।
उनी विदेशीका प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउन निकै सचेत देखिन्छन् । विदेशीलाई सजिलै मुलुकमा छिर्न दिनु नहुने उनको राय छ । उसो त तत्कालीन हिन्दुस्तानमा व्यापारका वहानामा छिरेका फिरिङ्गी (बेलायती/अङ्ग्रेज)ले केही समयमै सिङ्गो दक्षिण एसिया (नेपालबाहेक) कब्जा जमाएको यथार्थ पृथ्वीनारायणलाई राम्ररी थाहा थियो ।
यसै कारण पनि उनी विशेषगरी दक्षिणमा विस्तारै आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गएको अङ्ग्रेजसँग निकै सचेत र सजग थिए ।
यसै कारण उनले देशभित्रै कपडालगायतका उद्येग, कारखाना स्थापना र विस्तारमा महत्त्व दिए । आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशको पैसा विदेश जान नदिन विभिन्न योजना अघि सारे ।
उनको भनाइ नै थियो, ‘जनता बलिया भए दरबार मोटो (बलियो) हुनेछ । र, यो तत्कालीन समयमा तथ्य कुरो पनि हो ।
पृथ्वीनारायण शाह निकै दूरदर्शी र चलाक अनि साहसी शासक हुन् । दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको समदूरी सम्बन्धप्रति उनी निकै सचेत थिए । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भनेर निकै सजग र सचेत भएर नेपालले कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । उनले उत्तर अर्थात् चीनबाट भन्दा दक्षिण अर्थात् भारतबाट नेपाललाई बढी चुनौती र डर रहेको बताएका छन् ।
पृथ्वीनारायणले भारततिरका शासक निर्क चलाक अर्थात् ‘महाचतुर’ रहेका र सधैँ राष्ट्रिय सुरक्षामा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताएका छन् ।
आफू कसैप्रति पहिला जाई नलाग्ने तर आफूमाथि आई लाग्नेलाई नछाड्ने उनको घोषित नीति नै रहेको पाइन्छ ।
निकै लामो र पटक पटकको प्रयासपछि विजय प्राप्त गरेको काठमाडौंप्रति उनी निकै संवेदनशील र सचेत थिए । काठमाडौं वरपरका सिमानामा कडा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि उनले भनेका छन् ।
यो पृथ्वीनारायण शाहको आफ्नो मुलुक एकीकरण अभियानप्रतिको निष्ठा र सचेतता थियो । उनी एकीकरण गरिएको मुलुकलाई फेरि बिखण्डित हुन नदिन निकै होसियार थिए भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक र मुलुकवासीका हितका लागि अन्य धेरै कामहरू गरेका छन् । तल्लो जातका भनिएका दलितहरूबाट उनले सम्मानपूर्वक एकीकरण अभियानमा सहयोग मात्र लिएका छैनन्, आवश्यक सुझाव र सल्लाहका लागि पनि उनीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण चर्चित बिसे नगर्ची हुन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको आज जन्मदिन, जसलाई मुलुकले राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । बीचमा ‘गणतन्त्र’को अहंका कारण केही समय एकता दिवस र पृथ्वीनारायणलाई बिर्सने मूर्खतापूर्ण प्रयास हाम्रा शासकले नगरेका होइनन् । तथापि, पुनः इतिहासलाई बिर्सन नसकिने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ ।
यस पटक राज्यका तीनवटै प्रज्ञाप्रतिष्ठानले भव्यताका साथ राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वीजयन्ती मनाए । यसले पनि पृथ्वीनारायण नेपाली इतिहासका गलत पात्र थिएनन्, होइनन् भन्ने प्रामाणित भएको छ ।
पृथ्वीनारायण जस्तै नेपाली इतिहासले भुल्न नहुने अन्य केही शासक छन् नेपालमा । उनीहरूलाई या त निरङ्कुश वा तानाशाहका नाममा या सामन्त र राष्ट्रघातीका नाममा आलोचना गरिँदै आएको छ ।
यिनैमध्येका अर्का एक शासक हुन्, जंगबहादुर राणा ।
१९०३ सालमा भएको कोतको हत्याकाण्डपछि एकाएक नेपाली रजनीतिमा प्रभाव जमाएका जंगबहादुर कुँवर (राणा) तत्कालीन शाह वंशका राजालाई खोपीमा वा पिँजडामा सीमित गरेर प्रत्यक्ष शासन चलाउने शासक हुन् ।
यसै कारण उनलाई सामन्ती, निरङ्कुश र तानाशाहका रूपमा लिइन्छ । यो तथ्य हो कि उनले आफ्ना परिवारका सदस्यले मात्र शासन चलाउन पाउने गरी अर्थात् जहानियाँ शासनको सुरुवात गरे । यसले मुलुकको शासन पद्धति सम्पूर्ण रूपमा एउटा परिवार अर्थात् राणामा केन्द्रित भयो, जसका कारण मुलुकमा विकासको गति कमजोर बन्यो ।
राणा परिवारभित्रै सत्ताको लुछाचुँडी र हत्याहिंसा बढ्यो । तनाव सिर्जना भयो । एक भाइलले अर्को भाइ मार्ने क्रम बढ्यो । यो नितान्त गलत कर्म थियो ।
तथापि, एकातिर चीन जस्तो ठूलो मुलुक र अर्कातर्फ भारत जस्तो ठूलोका साथै अङ्ग्रेज जस्ता चतुर र निर्मोही शासकले शासन गरेको मुलुकका बीचमा रहेको नेपाल जस्तो अत्यन्त निरीह र सानो मुलुकलाई जोगाउन जंगबहादुरले खेलेको भूमिकालाई कमजोर कसरी भन्ने ?
उसो त बेलायत यात्राका क्रममा त्यसबेलाको सर्वशक्तिमान अनि विश्व विजयको महत्त्वाकाङ्क्षामा बढेको बेलायतलाई आफूलाई भव्य राजकीय सम्मान दिने भए मात्र बेलायत जाने प्रस्ताव गर्न सक्ने जंगबहादुर कसरी अराष्ट्रवादी ?
राणाकालकै शासक चन्द्रशम्शेर अर्का नेपाली इतिहासले सम्झिनुपर्ने व्यक्ति हुन् ।
उनले आफ्ना छोरा, भाइका लागि राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग अवश्य गरेका हुन् । तर, अहिलेको त्रि–चन्द्र कलेज उनकै योगदान होइन र ? त्रि–चन्द्र कलेज स्थापनापछि भनेका थिए रे, ‘ओहो, मैले त आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेछु ।’
यसरी नै राष्ट्रिय जनगणना, जुन राज्यका योजना र नीति अनि विकासका कामका लागि अतिमहत्त्वपूर्ण छ, त्यसको सुरुवात गर्ने पनि त उनै चन्द्रशम्शेर नै हुन् ।
भरियालाई भारीमा बोकाएर मोटर नेपालमा भित्र्याउने चन्द्रशम्शेर नै थिए भने पहिलो पटक नेपालमा बिजुली बत्ती उत्पादन गराउने र रज्जुमार्ग (रोपवे) निर्माणमा पनि चन्द्रशम्शेरकै योगदान देखिन्छ ।
चन्द्रशम्शेर आफैँमा कडा शासक मानिन्छन् तर उनको कार्यकालमा जनि विकास र सामाजिक सुधारका कार्य अन्यका त के अहिलेसम्मका कुनै पनि शासकका समयमा भएका पाइँदैन ।
चन्द्रशम्शेरलाई सम्झिइनुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेको सती प्रथा र दास प्रथा उन्मूलन हो । पशु किनबेच गरेझैँ मानिसलाई किनबेच गरेर दास बनाउने तत्कालीन कुपरम्परालाई अन्त्य गर्दै चन्द्रशम्शेरले नै हो– दास अमलेख गरेको ।
यसरी नै हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूलाई पतिको मृत्युसँगै सती जान बाध्य पार्ने अमानवीय वीभत्स कुपरम्पराको अन्त्य पनि उनै चन्द्रशम्शेरका समयमा भयो । यदि उनले त्यसलाई अन्त्य गरेको घोषणा नगरेका भए निकै लामो समयसम्म हाम्रा आमा, छोरीचेलीले सतीको सिकार बन्नुपर्थ्यो ।
के यी निरङ्कुश, तानाशाह र सामन्त शासकले गरेका अगतिला र राष्ट्र अनि समाजविरोधी कार्य हुन् ?
अर्का नेपाल र नेपालीले भुल्न नहुने शासक हुन्, राजा महेन्द्र । उनी निरङ्कुश, तानाशाह भईकन पनि देश र जनताका लागि उनले गरेका कार्यलाई सम्झिँदा भने उनीप्रति हरेक नेपाली नतमस्तक बन्छ ।
राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र चतुर थिए, त्यति नै देश विकास र जनहितप्रति अनि राष्ट्रियताका सवालमा संवेदनशील पनि थिए ।
राजा महेन्द्रले त्यस समयमा विभिन्न देशको भ्रमण गर्दै ती देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नुमा उनको उल्लेख्य भूमिका थियो ।
दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्धलाई जोड दिँदै भारत र चीनको मात्र होइन, रुस, अमेरिका र अन्य देशको पनि वैदेशिक सहयोगलाई स्वागत गरे ।
२०२४ सालमा अरनिको राजमार्ग बनाएर नेपाल र चीन सडकले जोड्नमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो ?
महेन्द्रले नै हो नेपाली नागरिकलाई आफ्नै पहिचान दिने उद्देश्यका साथ नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सुरु गरेको ।
नेपाल–भारत सिमानामा महेन्द्रले भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जमिन दिएर मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न भागमा बसोवास गराए । तराई–मधेसमा बसोवासलाई प्रोत्साहन गरे ।
राजा महेन्द्रले मेची–महाकाली जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग बनाउने निर्णय गरेर नेपालभित्रै यात्रा गर्न भारतको बाटो भएर कष्टकर तवरले हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरे ।
वीरगञ्ज नजिक सिर्सियाबाट हेटौँडा–सिमभञ्ज्याङ–थानकोटसम्म १५९.६६ किलोमिटर त्रिभुवन राजपथ अर्थात् ‘बाइरोड’ बनाएर राजधानी काठमाडौं आउन यति सहज बनाइदिने पनि उनै महेन्द्र हुन् ।
काठमाडौं–पोखरा जोड्ने पृथ्वीराजमार्ग चीनको सहयोगमा बन्यो उनकै पहलमा । सातदोबाटोबाट हेटौँडा पुग्ने ९० किलोमिटर लामो कन्ति राजपथ पनि राजा महेन्द्रकै सोचको उपज थियो ।
भारतीय सेनालाई दक्षिणी र उत्तरी सीमाहरूबाट हटाउन, नेपालमा भारुको प्रचलन बन्द गर्न, भारतको विरोध हुँदाहुँदै पनि कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको नाका खोल्न, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न उनले गरेको निर्णय र उनले देखाएको सक्रियता के साँच्चै राष्ट्रवादी थिए ।
यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रिय सुुरक्षालगायतका हरेक क्षेत्रमा राजा महेन्द्रका काम हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।
राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेको भूमिसुधार राजा महेन्द्रले २०२१ सालमै भूमिसुधार लागू गरिदिए । उनले जमिनदारका लाखौँ बिघा अनुत्पादक जमिन खोसेर हजारौँ भूमिहीन किसानलाई वितरण गरे ।
वर्गीय, जातीय र वर्णका आधारमा नेपाली समाज लामो समयदेखि पीडित छ । यस्तो अवस्थामा छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय बनाउने महेन्द्रजतिका राष्ट्रवादी अहिलेका गणतन्त्रको नारामा अल्झिएका राजनीतिक नेतृत्व छन् ?
मुलुकको विकास र समृद्धिलाई योजनाबद्ध ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गर्ने मेहन्द्र, केन्द्रिकृत विकास नीतिलाई विकेन्द्रिकृत गर्न मुलुकलाई राजनीतिक विभाजन गरेर ५ विकासक्षेत्र, १४ अञ्चल अनि ७५ जिल्लामा विभाजन गर्ने राजा महेन्द्रलाई विकासविरोधी र अराष्ट्रवादी कसरी भनूँ ?
यसका अतिरिक्त नेपालको शिक्षा क्षेत्र, चलचित्र, उद्योग आदिमा राजा महेन्द्रको योगदानको मूल्याङ्कन सही तवरले नभएको देखिन्छ ।
यसर्थ नेपालको इतिहासलाई मिहीन ढङ्गले केलाउने हो भने हरेकजसो शासकले देश र जनताका लागि केही न केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकै छन् ।
हामीमा रहेका आग्रह र अफवाहका कारण हामीले हाम्रा पुर्खाका, हाम्रा पूर्वशासकका सकारात्मक योगदानलाई छायामा पारिरहेका त छैनौँ ?
समय र परिस्थितिअनुसारका शासन व्यवस्था हरेक मुलुकमा रहँदै आएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसका आधारमा इतिहास गलत कोर्नु र सही काम गरेका व्यक्ति वा शासकका सही कर्मको इतिहास नामेट पार्नु, पार्न खोज्नु बहादुरी होइन, असभ्यता र सङ्कीर्णता मात्र हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, २७ पुस २०७६, ०९:३३:००